बिशेष Archives - Page2of 119 - TV Annapurna
शुक्रबार केपी ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनको मन्त्री मण्डलमा ११ नया मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपीएका छन् । उनको मन्त्रीमण्डलमा पहिलो पटक सुदूरपश्चिम अर्थात हालको प्रदेश ७ बाट एक जना महिला क्याविनेट मन्त्री बन्नु बनेकी छिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्र स्व. प्रकाश दाहालकी पत्नी समेत रहेकी माओवादी नेत्री एवं कञ्चनपुर क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बीना मगर सुदूरपश्चिमबाट पहिलो क्याविनेट मन्त्री बनेकी हुन् । सुदूरपश्चिमबाट यसअघि कुनैपनि सरकारमा महिला मन्त्री बनेका छैनन् । २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको क्याविनेटमा द्वारिकादेवी ठकुरानी सहायक मन्त्री बनेकी थिइन ।…
बिशेष, राजनीति, समाचारLeaveacomment
March 15, 2018 Annapurna TV
धेरै हवाई दुर्घटना हुने विश्वका टप मुलुकहरुको सूचिमा नेपाल पनि पर्छ । एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, धेरै एयर ट्राफिक । डाँडाकाँडा भएको राजधानी काठमाडौंमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना हुने गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आवतरण गर्ने क्रममा यूएस–बंगला एयरको विमान बङगलादेशबाट नेपाल आउने क्रममा काठमाडौंको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा दुर्घटना हुदा ४९ जनाले ज्यान गुमाए। २२ जना घाइतेको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । त्रासद दुर्घटना मानिने यस्ता विमान दर्घटनामा चालक दल र यात्रुहरु दुवैको ज्यान जाने गरेको छ। नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई दुर्घटनाहरु नेपाली आकाशमा चारवटा अन्तराष्ट्रिय विमान…
March 15, 2018 March 15, 2018 Annapurna TV
सर्वोच्च अदालतका कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले पत्र काट्नेबारे आफूलाई पहिल्यै जानकारी रहेको खुलासा गरेका छन्। न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधबार पत्र काटेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए। सोही पत्रका आधारमा पराजुली पदमुक्त भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका जोशीले उक्त पत्रबारे भने, पत्र काट्ने सचिवको व्यक्तिगत निर्णय होइन, यो जानकारी मात्र गराइएको हो। निरौलाले व्यक्तिगत रुपमा पत्र काटेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा जोशीले पत्र काट्नेबारे आफूलाई पूर्वजानकारी रहेको प्रष्ट पारे। कसले पत्र काट्न लगाएको भन्नेबारे भने केही बताएनन्। उनले…
तेस्रो लिङ्गीहरुले सरकारले कानुन नबनाउदा आफुहरु विवाह गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान गरे पनि त्यस सम्बन्धी कानून बनाउन अलमल गरेको गुनासो गरेका छन् । समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानून बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले भने यस्तो संवेदनशील विषयको कानून बनाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ। विवाह गर्ने रहर २४ वर्षीया एनी लामा घरजम गर्ने रहर भएको बताउँछिन्। राम्रो जीवन साथी पनि भेटिसकेको तर उनीहरू दुईबीच…
March 12, 2018 March 12, 2018 Annapurna TV
एप्पलले ल्याएको आईओएस ११.२ अपरेटिङ सिष्टममा ल्याएको नयाँ सुविधाले प्रयोगकर्तालाई धेरै सजिलो बनाइदिएको छ । आईओएस ११.२ मा ल्याएको नयाँ फिचरले ड्राइभिङ गर्दा हैरानी नहुने पारिदिएको छ । यसमा थप गरिएको यो फिचरले कार चलाउँदै गर्दा फोनलाई कार मोडमा राखेर नोटिफिकेशन पनि नआउने बनाइदिएको छ । ड्राइभिङलाई सुरक्षित बनाउनका लागि कारको सङ्केतयुक्त ‘डू नट डिस्टर्ब’ को फिचर थपिएको हो । आइफोन ५ एसभन्दा माथिका मोडलमा अपडेट गर्न मिल्ने आईओएस ११ लाई सीधै सेटिङबाट वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी आइट्युन्समार्फत गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्ने एप्पलले आफ्नो अपरेटिङ…
March 11, 2018 Annapurna TV
सास गन्ध आएर अरुका अगाडि राम्रोसँग कुराकानी गर्नसमेत अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा लाजको अनुभव हुने नै भयो । साथै श्वासको गन्धले मानिसको स्वास्थ्य र खानपिनको अनुपयुक्त आनीबानीसमेत झल्काइरहेको हुन्छ । मुख र पेटका विभिन्न रोग र सरसफाइको कमीका कारण सास गन्हाउँछ । यस्तो बेला अपनाउनुहोस् केही सजिला उपाय : १. आफ्नो सरसरफाइको बानीको मूल्याङ्कन गर्ने दाँत माझ्नु र जिब्रो सफा गर्नु श्वास गनाउने समस्याबाट मुक्ति पाउने पहिलो शर्त हो । खानेकुरा खाइसकेपछि कुल्ला गर्नु मुखको सरसफाइको लागि महत्वपूर्ण छ । यति गर्दा पनि धेरै श्वास गन्हायो भने पोषणको अनियमितताका कारण त्यसो…
रक्सी खाएपछि नगर्नुहोस् यी ७ काम
March 10, 2018 TV-Annapurna
सकेसम्म त रक्सि नखाएकै बेस । रक्सि खाएपछि गरिने धेरै कामले तपाईको सम्बन्ध,जागिर तथा अन्य कुरा समेत भताभुंग हुनसक्छ । तेसैले सकेसम्म रक्सिको मात्रा मिलाएर आफ्नो शरीरले थेग्ने गरिमात्र खानुपर्छ वा रक्सि खाएको बेलामा तपाईलाई भविष्यमा हानी पुर्याउने काम नगर्नुहोस् । हामी तपाईंलाई यस्ता कार्यको बारेमा बताउदै छौ जुन रक्सि खाएको बेलामा नगर्नु राम्रो हुन्छ : १. रक्सि खाएर गाडी नचलाउनुहोस् , ज्यान नै जान सक्छ । २. रक्सि खाएर अनलइनमा फोटो अपलोड नगर्नुहोस्, बेहोसी तालमा तपाईले गर्नै नहुने फोटो अपलोड हुनसक्छ । ३. कसैलाई जिस्काउने,होच्याउने नगर्नुहोस्, नशा उत्रिए पछि आफैलाई लाजमर्नु हुन्छ । ४. प्रेमी /प्रेमिका…
माओवादीका भाग्यमानी नेताः १० वर्षमा ७ पटक मन्त्री, पाँच वर्ष समाभुख
March 9, 2018 March 9, 2018 Annapurna TV
राजनीति सत्तामा जाने सिढीँ भएको स्वयं नेताहरुले नै बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् । लामो समय राजनीति गरेर सत्ताको स्वाद चाख्न नपाएका नेताहरु नेपाली राजनीतिमा धेरै छन् । तर नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता बेमौसमी नेतापनि छन जो प्रायः सत्ताकै हालीमुहालीमा देखिन्छन् । त्यस्ता नेताहरुको सूचिमा अग्रपन्तिमा देखिने नेताहुन् विजय गच्छेद्धार तर पछिल्लो समय त्यो स्थान माआवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पनि प्राप्त गरेका छन् । महरा मुलुककै सबैभन्दा भाग्यमानी राजनीतिक नेताका रुपमा देखा परेका छन् । प्रतिनिधि सभामा अबको ५ वर्षका लागि निर्विरोध सभामुख भएपछि राजनीतिका यी चलाख खेलाडी माओवादीमा सबैभन्दा ’भाग्यमानी’…
हल्लै हल्लाको नेपाल बन्द, यस्तो छ वास्तविकता
March 8, 2018 March 8, 2018 Annapurna TV
फागुन २५ र २६ गते नेपाल बन्द भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ । विभिन्न पर्चा पम्पलेट पनि सार्वजनिक भएका छन् । बन्दको वास्तविकता अहिलेसम्म नत कसैलाई थाहा छ, नत कुनै आधिकारिक जानकारी वा सूचना छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले बन्दको हल्ला आफूले पनि सुनेको तर वास्तविकता भने आफूलाई पनि थाहा नभएको र नेकपाको बन्द हुदै नभएको प्रष्ट पारेका छन् । तत्कालिन माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेनाको रन्जित गुरुङ्ग समूहले गर्न लागेको भनिएको बन्दको वास्तविकता के हो त ? पूर्व लडाकु रन्जित गुरुङ्गले दिएको जानकारी अनुसार बन्द…